‘राम प्यारी’ पछि ‘रातो घर’ मा भेटिइन् आश्मा « Ramailo छ
‘राम प्यारी’ पछि ‘रातो घर’ मा भेटिइन् आश्मा
रेखा थापाले निर्माण गरेको फिल्म ‘राम प्यारी’ मा नायिका आश्मा डिसी बैनीको भूमिकामा थिइन् । फिल्म रिलिजताका आश्मा प्रचार प्रसारमा राम्रै लागिन् । ‘राम प्यारी’ हलमा चल्दै गर्दा उनले हलका दर्शसँग विफी खिचिन् । त्यसपछि आश्मा कता हराइन् ? उनी के गर्दैछिन् ?
लामो समयपछि आश्मा गत बिहिबार फिल्म ‘रातो घर’ को विशेष शोमा झुल्किइन् । प्रेमी संयम पुरीले अभिनय गरको उक्त फिल्म हेर्न आश्मा बिग मुभिज पुगेकी थिइन् । ‘रातो घर’ राम्रो लागेको बताउने आश्मा आफैैं फिल्म चाहिं कहिले खेल्छिन् त ? ‘राम्रो स्क्रिप्ट आए खेल्छु’, आश्माले पनि खाली बस्ने कलाकारले दिने जवाफ दिइन् । उसो त उनी पढाइसँगै विभिन्न कार्यक्रममा पनि व्यस्त छिन् ।